Zvita 8, 2006 na11:36 PM
Ini ndinobvuma kuti hapana chikonzero chekushandisa IE zvakare, asi zvinosuruvarisa kuti nyika ichiri yakazara nevazivi veinternet vasingazive zviri nani. Ndinovimba kuti izwi remuromo richachinja izvo pakupedzisira.
Ndanga ndiri mushandisi anofara weFirefox kwemakore akati wandei ikozvino. Ndinonzwa murudo nazvo nekuda kwekuwedzera kusingaverengeki, uye nekuwedzera kuchengetedzeka pamusoro peInternet Explorer.
Pandakawana MacBook Pro yangu itsva kutanga kwegore rino, ndakaedza Safari kwemavhiki mashoma, asi ndakazodzokera kuFirefox. Idzo sarudzo dzekugadzirisa dzinenge dzisina muganhu. Mugore rapfuura, ndakabudirira kushandura mhuri yangu yese (uye zhinji dzeshamwari dzangu) kuita Firefox.
Paul aisada kundinyadzisa – asi uchaona kuti ndakagadzirisa mafungiro angu kune philes! Kubata kwakanaka kubva kuna Paul aive akanaka zvekunditumira email! Vanhu vanondiziva vanoziva kuti ndiri shasha pakugadzira Chirungu. Chokwadi ishamwari ichakununura kubva pakuzvinyadzisa!
Paul ane bhurogi rakanaka pamusoro pa:
Ini ndinobvuma zvachose kuti Firefox icharova IE 7 kana kuenderera….
Chikonzero chekurova ndechekuti Firefox Plugins uye Firefox Add-ons.
Ndinofunga muna Chikunguru 2007, IE ichamira pa35%
Assalamu, Fazal. Ndinobvumirana newe! NeFirefox 3 Alpha yatobuda, Mozilla irikupisa nzira iyo Microsoft isingakwanise kukwikwidza nayo.
Kukadzi 3, 2007 na6:46 PM
Ndakaisa IE7 padesktop computr yangu uye yakashanda zvakanaka mushure mekunge ndaita nyaya nayo asi pandakaiisa palaptop yangu, yakamisa zvese. Dai ndisina kuona kuti chirongwa (pasina ma-add-ons) chaisanganisirwawo nemapurogiramu angu pasi pezvishandiso handaizokwanisa kuenderera.
Ndine hanya, ndinoita zvebhangi online uye handina chokwadi chekuti ndinogona kushandisa Foxfire. Ndinoda kuedza asi ndinoda rumwe ruzivo.
Kukadzi 3, 2007 na7:39 PM
Mabhengi emazuva ano epamhepo anoenderana nebrowser. Chinonetsa chingava chekutsigira SSL (Secure Sockets Layer), ndiyo nzira yakavharidzirwa yekufambisa data pakati pebrowser yako nemaseva epamhepo ebhangi. Firefox inotsigira zvizere SSL sezvinoita IE pasina miganhu. Nzira iri pachena yekuziva kuti uri kushandisa SSL ndeyekuti uri pa https:// kero pachinzvimbo che http://. Nekudaro, ese ari maviri IE neFirefox (uye Opera neSafari) zvakare ane zviratidzo zvekuona uye maitiro ekuona kuti SSL chitupa uye encryption inoshanda uye inoshanda nemazvo.
Mune mamwe mazwi - haufanirwe kunge uine chero nyaya. Ehe hazvimborwadzi kutarisa peji rebhangi rako "Support" kuti uone kana vachitsigira Firefox. Iwe unozonyatsoiwana iri bhurawuza rakanaka - rinokurumidza kwazvo riine zvimwe zvakawanda zvinonaka.
Ndatenda nekushanya… uye nekupa mhinduro!
Nov 3, 2007 na5:50 PM
Firefox yakayambuka mamirioni mazana mana ekurodha chiratidzo uye, ndinovimba, ichaenda mberi. Dzimwe nzira dzinogara dziri nzira yekufambira mberi.
Asi kuhwina kwebrowser hondo… zvichiri kutanga izvo.
Nov 3, 2007 na11:24 PM
Ndashandisa IE kwemakore, ramba uchiishandisa uye kutaura chokwadi handina kufadzwa nemabhenefiti emushandisi-chikamu cheFirefox. Ndinofungidzira kuti ruzhinji rwevashandisi vanogona kuita hanya zvishoma. Ndinobvumirana newe, zvisinei, kuti shanduko kuIE 7 dzaive dzakati vhiringike.
Nov 21, 2007 na8:11 PM
Ndinobvumirana nemafungiro ako paIE7 uye kuva mugadziri wewebhu, ndakaregererwa nezvinhu zvishoma apo IE7 yakasunungurwa. Parizvino ndiri mukugadzira webhusaiti nyowani uye ndasangana nedzimwe nyaya ne divs asi hapana chikuru (kusvika parizvino). Ini ndangoshandisa IE7 zvishoma asi ndanga ndichitarisira kusvetuka kukuru kubva pa6.0 ndichireva kutsigirwa kweCSS, nezvimwe.
Ndanga ndiri mushandisi weFirefox kwemakore uye ndakatora vashoma vashandisi vatsva munzira. Ini ndinofunga chinhu chinonyanya kundikwezva, uye vamwe vazhinji vashandisi veFF, inyaya yekuti yakanyanya webhu dhizaini / kuvandudza hushamwari uye kugadzirisa kunoityaira. Ndinofunga IE icharamba ichidonha uye ndinofunga Microsoft ichada chishamiso panguva ino. Iko kusimba kwakawana Firefox uye Safari iri kuwedzera zvishoma nezvishoma, iri kunze kweIE uye nyaya yekuti vanoramba vachitadza kugadzira webhu webhu inoteerana nebrowser, haisi kuvabatsira chero.
Isu vagadziri vewebhu tinogona kungovapa mikana yakawanda kwazvo 😛
Nov 22, 2007 na7:44 AM
Mashoko aya ari kurasisa. Maererano nenhamba dzemazuva ano dzandakaona chikamu cheIE "chakaderera" kubva pa85.88% pasi rose chikamu cheQ4 2005 kusvika ku78.5% yeQ3 2007. Ndiyo inodonha ye7.3% mumakore maviri.
Zvichakadaro, Firefox yakawedzera kubva pa9% kusvika 14.6% munguva imwe cheteyo. Iko kuwedzera kwe5.6% mukati memakore maviri.
Safari yakabva pa3.1% kusvika 4.77% - kuwedzera kusingakodzeri kutaura nezvazvo.
Hongu Firefox iri kuwana paIE, asi IE ichiri sezviri pachena ine vanopfuura 5x vashandisi.
Aya manhamba anobva kuWikipedia "Usage_share_of_web_browsers" uye hongu anogona kurerekera neimwe nzira.
Sezviri pachena vazhinji vepasirese havana basa nezvinofungwa nevagadziri vewebhu. Ndinofunga kuti tinofanira kugadzirira ruzhinji pane kunetseka pamusoro pezvatinoda isu pachedu.
Nov 22, 2007 na8:48 AM
Thanks Rick! Tingabvunza here kuti kwaunobva kupi maererano ne stats?
Ndinobvumirana newe, asi pane yambiro yekuti tisave nehanya nezvinofungwa nevagadziri vewebhu… uye ndiko kuti dhizaini yewebhu icharamba ichidhura kana uchinge wagadzira kunze kwezviyero kufadza iyo 85.88% mugove wemusika!
Nov 22, 2007 na2:25 PM
Chinogara chiri pamberi pekugadzira ruzhinji asi chokwadi chekuti Microsoft haisi kutevedzera nevamwe vese, inoita kuti mabasa edu anyanye kuoma. Ini ndinozviona ini dzimwe nguva ndichifanira kunyora akaparadzana zvachose masitayera mashiti eIE chete uye zvinotora nguva. Hazvirevi chinhu kune avhareji mushandisi. Zvinongoshungurudza kana bhurawuza rinotungamira iro paki iri iro rinenge diki rewebhu zviyero zvinoteedzera.
Nov 22, 2007 na3:44 PM
Ini handina nharo nezvinokunetsa kubva pakuona kwemugadziri, kunyangwe ndisingazive kuti sei uchinetsekana kuti unogona kubhadharisa vanhu zvakawanda nezvesevhisi yako. Inyaya yekuti vanhu havana kugadzirira kuibhadhara here? Zviripachena idzi inyaya dzehunyanzvi dzinofanirwa kukundwa.
Ini ndinongotora nharo nezano rekuti kune kufamba kukuru kubva kuIE. Iwo manhamba (sezvandinogona kutaura) haatsigire chirevo ichocho, kunyangwe vese vanogadzira uye maSEO vanoti neimwe nzira uye vanosimudzira FF. Kana vachifanirwa kunge vachizvisimudzira mumwe mubvunzo, uye unogona kunge wakanyatso taura nezvazvo.
Sezvandakataura mukutaura kwangu, sosi yangu yaive Wikipedia - kwete iyo inonzwika inonzwika sosi, asi iyo nhamba inotaridzika chaizvo…
Nov 23, 2007 na5:42 PM
Iwe unogona kunge wakarurama pazvinhu zvese zviri zviviri, Rick. Ndingapokana kuti IE inoramba iine chikamu chikuru chemusika nekuti chikamu cheOperating System, zvakadaro. Dai yaive yekurodha yekurodha uye sarudzo yakanaka, ini ndinotenda chaizvo kuti FF inenge ichirova matako avo.
Ndaimbova programmer uye web developer. Muna 2003 ndakaita tsaona ndikarova musoro. Kodhi yekunyora yandiwandira, saka ndangori munhuwo zvake joe..lol
Zvisinei, ndanga ndichishandisa Linux kubvira sa1996 (rangarira Caldera-pawaifanira kuirega ichizvidhawunirodha kwemazuva maviri..lol). Mabhurawuza ewebhu haana kumbove akakunakira pamberi peFirefox. Pakabuda Firefox, chaive chinhu chikuru kune vashandisi veLinux (Thunderbird futi). Sezvo Microcrap yagara ichikuvadza vashandisi veLinux, vakazvipfura mutsoka. Ndinorangarira Firefox/Thunderbird ichiva iyo yepamusoro internet suite yeLinux zviri nyore. Haisi yakakura, uye iwe unogona kuisa chero yekuwedzera yaunoda (adblockl!). Saka, inoreruka kana kurema sezvaunoigadzira. Hapana zvikamu zvisingadiwe zvachose. Matebu anotonhorera uye madiki.
Parizvino ndiri kushandisa Windows xp, nekuti 'vamwe' pano zvinosiririsa vakaita kuti ive mamiriro ekutenga iyi pc, saka 'ivo' vaigona kuishandisa (idiots). Ndosaka ndakatora ipapo ipapo firefox/thunderbird. Pandakashandisa Windows zvakare, NDAKANGA NDAVENGO Outlook express, uye ndichiri kuda kuti Firefox idzoke, nekuwedzera kwangu (ndakatochengeta mafaira ose ekugadzirisa uye mabhukumaki angu kubva kuLinux, uye ndakaapinza muWinxp!).
Munguva ichangopfuura, pc yangu yakatangazve husiku, uye ini ndanga ndiine iyi ALIEN inotarisa mafuta ekushandisa ane HUGE ma tabo asingaende. Iyo friggin tool mabara inotora 1/5 yechidzitiro chakashushwa! NDAKAZVIVENGWA! Vamwe vese vaive apa vaizvivengawo. Bhatani re STOP riripi? Hapana anoda kuti browser itore nzvimbo yakawanda kudaro! Matebu makuru, kunyangwe paine peji 1 chete !!
Zvakadini nepeji rewebhu? Iwe haugone kana kuzviona nekuti zvese zvaunoona iBROWSER! Zvinovhiringidza, zvekuti handina kukwanisa kumira nazvo. Microsoft zviri nyore HAina nzvimbo yekunyunyuta kana. Murwi wemarara akarasika. Chidzitiro changu chegadziriso chakaiswa pa1152 × 864 uye handigone kufungidzira kuti yaizotaridzika sei pa800 × 6000! Ndingatokwanisa kuona peji yacho here?
Saka zvigunwe zviviri pasi zveIE2! Munhu wese anozvivenga, uye rufu rweIE. Zvinosekesa, vaive nebrowser yakanaka, asi nekukopa Firefox, ivo zvino vane junk. I mean.. ko kupenga kwese kumatoolbar chii, uye mamwe mabhatani aripi??
Saka, ndatenda Microsoft, wazviita wega pakupedzisira! Ini zvino ndinopedza nguva yakawanda ndichitsanangurira vamwe vanofona vachibvunza kuti nei browser yavo ichingoerekana yatyisa uye yakaoma, uye kuvabatsira kuburitsa IE7! Hapana anoida!
Ndinofunga kodzero yenyu Mr. Blog murume, Ndave kushandisa Firefox pakombiyuta yangu kwerinopfuura gore zvino uye handina kutarira shure kubvira. Chero ani anoziva chero nezve komputa software anogona kukuudza kuti Firefox ndiyo yepamusoro browser maoko pasi. Handisati ndamboedza Thunderbird software nekuti iyo Outlook 2007 muHofisi Enterprise yakanaka kwazvo uye inondiitira zvakanaka. Sei uchichinje kana isina kuputswa. IE 6-7 yakatyoka, chero nguva yandinoshanda kushamwari, mhuri, shamwari yepamhepo, kana munhu anoda rubatsiro ndinogara ndichiisa kana kuvaudza kuti vawane Firefox. Hazvina musoro mubhuku rangu.
Ini ndinongoda kuziva kuti sei Microsoft yaifunga kuti vari kuburitsa bhurawuza repamusoro, ivo vasina kukwana zvachose kune nyika yakavatenderedza? Imhaka yekuti vanofunga kuti software yavo inoshamisa zvekuti vanhu vanongoishandisa zvakadaro? Kana kuti imhaka yekuti Microsoft yaitora mabhiriyoni pazuva uye vakati "kanganwai mutengi hatina basa nezvavanofunga" saka vakangoda kumanikidza browser isina basa uye isingateereri pamusika. Idiots! Izvo hazvina kuita sekuti ndine junky komputa, IE inomhanya kunge crap pane chero system. Inofanirwa kunge iri musoftware kodhi kana chimwe chinhu.
Zvekunakidzwa chete ndakazvitakura nhasi kuti ndione kana yanga yavandudzwa neimwe shura (nope) ichiri kuyamwa. Ipapo ndakati kwandiri "Sei, nei ichimhanya zvakadaro" saka ndakatsvaga (Sei Internet Explorer ichiremedza zvishoma nezvishoma) uye zvechokwadi ndakashandisa Google yekumba peji yekutsvaga paFirefox. Ndakaguma pano mushure mekutevera chinongedzo kubva kune imwe saiti ine chinyorwa chakadai pairi. I got side tracked saka handisati ndave nemhinduro yangu. Enda kuFirefox Go! Kick Bill Gates munzungu kwatiri tese kamwechete pamunhu nguva dzese. Ini ndichacherechedza imwe dhizaini kumashure kuFF zvakadaro, zvakaipa nezvekushandisa ndangariro. Mufungo wakamisikidzwa zvirinyore, kukurumidza, kwete kunonoka kutangazve kunogadzirisa izvo.